သင်၏အကြောင်းအရာလတ်ဆတ်သော! မှတ်ချက်များအပါအ ၀ င် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မေလ 11, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုရက်စွဲတစ်ခုနှင့်ပြသထားသောရက်စွဲမပါဘဲနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်“ ခေါင်းနှင့်ခေါင်း” ကိုအစဉ်အမြဲငါမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ကျော်မှာ DoshDosh, ငါသူတို့မှတ်ချက်များအပေါ်ရက်စွဲများရှိသည်သတိပြုမိပေမယ့်နေ့စွဲ post ကိုသူ့ဟာသူတွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ငါဒီဘလော့ဂ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုလို့ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီမှာငါနေ့စွဲကို URL နဲ့ရောရက်စွဲပါဂရပ်ဖစ်နဲ့ပါထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်တယ်။ အလုပ်အများကြီးမလုပ်ပဲနာရီကိုပြန်မဖွင့်နိုင်ပဲ!
အကယ်စင်စစ်ဤအရာကိုပြုလုပ်နေကြသည့်အခြားသူများစွာမှာလည်းကျွန်ုပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွင်သက်သေရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ Google Blogsearch ကိုရှာပါ။ ရလဒ်များကိုပြောင်းပြန်သက္ကရာဇ်စဉ်အလိုက်စီထားသည်။ ဂူဂဲလ်ထဲမှာတောင်မှ၊ ငါဟာဆောင်းပါးအသစ်တွေဟာရလာဒ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ အကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏ 'ပြန်လည်ထုတ်ဝေ' သောအခြားဘလော့ဂါများ - ဆောင်းပါး ၂ ခုနီးပါးတူညီသော်လည်းမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ အကြောင်းအရာနီးပါးတူညီပေမယ့်, ဆောင်းပါးအသစ်ထိပ်ထိပ်အနီးပေါ်လာ!
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်၏လူကြိုက်အများဆုံးရေးသားချက်များသည်တသမတ်တည်းမှတ်ချက်များရှိသည်သောတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုမယုံနိုင်ဘူး။ အသုံးပြုသူများသည်မှတ်ချက်များကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှပြန်ပြောင်းဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို 'refresh' ပြုလုပ်သည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်မှတ်ချက်များသည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုစာဖတ်သူများနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအကြား 'လတ်ဆတ်သော' သိုထားစေသည်။
Commenting Services သည်သင်၏လတ်ဆတ်မှုကိုသတ်ပစ်သည်
အတော်လေးရှိတယ်aဆူညံသံ on အ နည်းသော မှတ်ချက် န်ဆောင်မှု ထွက် on အ အောင်ဖြစ်ကြောင်းစျေးကွက် လုံးလုံး an သက်ရောက်မှု။ သို့သော်ဤနည်းပညာများကိုနားလည်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။
ပြBotနာမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ပရိုဂရမ်းမင်းအင်ဂျင်များဖြစ်သော Search Bot ဖြစ်သည် မဟုတ် browser တစ်ခု! Search Bot သည်သင်၏စာမျက်နှာအတွက်တောင်းဆိုမှု (D) ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မှတ်ချက်များမှတဆင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမည်မျှထည့်သွင်းသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ရှာဖွေရန်အင်ဂျင်သည်၎င်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့်အခါမျှတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ သင်၏စာမျက်နှာသည်ဟောင်းနွမ်းနေပြီးမေ့သွားတယ်။
ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြံ့ခိုင်ပြီးအသုံးပြုရတာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါလုံးဝမခေါက်ဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ဒီစနစ်များ၏အင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုသူ -generated အကြောင်းအရာနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထင်ရှားသောကြောင်းရိုးရှင်းစွာမယုံကြည်ကြဘူး။ ပြင်ဆင်ချက်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် server-side Application Programming Interfaces များကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဝဗ်ဆာဗာသည်အသုံးပြုသူ OR ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်မှတ်ချက်များကိုပြသနိုင်ဆဲဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှလည်းအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစျေးကွက်ထဲတွင်လက်တဆုပ်စာရှိပြီးသား ဖြစ်၍ သင့်ကိုယ်သင်ဤသို့မေးပါ။
သင်မည်သို့ထိန်းချုပ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲသလဲ? အသံက of သင့်ရဲ့ အကြောင်းအရာက သူတို့ ကိုယ်ပိုင်လား
အကယ်၍ သူတို့သည်စီးပွားရေးမှထွက်သွားပါကထိုအချက်အလက်များကိုသင်မည်သို့ပြန်လည်ရယူနိုင်သနည်း။ သင်သည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစွန့်ခွာရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကထိုအကြောင်းအရာကိုသင်မည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နည်း။ ဒါဟာရုပ်ဆိုးရနိုင်!
ကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်များပိုမိုထိရောက်စွာစီမံရန်အတွက်ဤကဲ့သို့သောတတိယပါတီ application များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များမှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိစေရန်သေချာစေလိုသည်။ သူတို့ကဆာဗာဘက်ကိုသွားရင်ငါစဉ်းစားမိတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မယ်။
သင်၏ developer များကဓားစာခံဖမ်းခြင်းကိုရှောင်ပါ
မေလ 12, 2008 မှာ 12: 49 AM
ဝိုး, ငါသဲလွန်စမှတ်ချက်များကို (တစ်ခါတစ်ရံ) သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ခြင်း၏အပြင်ဘက်တွင်ဤအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ကြသည်ခဲ့ရသည်။ ဒီအင်ဖိုကိုတင်ပို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေလ 12, 2008 မှာ 3: 24 AM
သင် SezWho ကိုကြည့်ပြီးပြီလား
အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်၊ သို့သော်သင်၏ရှိပြီးသားမှတ်ချက်စနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တိုးမြှင့်သည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုရရှိရန်ကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
sezwho မှာ tedd
မေလ 12, 2008 မှာ 8: 02 AM
မင်းရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုနောက်တစ်ခါကြည့် ဦး မယ်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခြားသူများနှင့် ပို၍ ထင်ရှားစွာခွဲခြားချင်ပေမည်။ လူများစွာကမင်းတို့ယောက်ျားတွေဟာမင်းကတခြားသူတွေလိုပဲထင်ကြတယ်။
ဘာဘရာလင် (ခေါ် Owlbert)
မေလ 12, 2008 မှာ 3: 48 AM
၎င်းသည်အလွန်တွေးဆစေသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ငါ post ကိုအပေါ်ရက်စွဲမရှိခြင်းအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးစေသည်ထင်, ဒါကြောင့်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်။ လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ - သင်သည်သင်၏ single.php ကိုအသစ်ပြောင်းပြီးရက်စွဲသို့ php ကိုးကားချက်များကိုဖယ်ရှားရုံသာဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်ပေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း, ငါသူတို့ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ငါ့ site ပေါ်တွင်ဖြောင့်လွင်ပြင်အခြေခံ vanilla မှတ်ချက်ပေးရှိသည်။ ငါလည်းဒီလောက်စဉ်းစားရ ဦး မယ်။
မေလ 12, 2008 မှာ 5: 11 pm တွင်
သင်အမှန်တကယ်ပြောနေတာကရက်စွဲများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းသည်သင့်တော်သည်ဟုပြောပါသလား (သို့ဖြစ်လျှင်သင်ဆန္ဒရှိပါက) ရက်စွဲတစ်ခုရှိခြင်းကအဟောင်းများကိုပို့စ်များ၏သက်တမ်းကိုဖော်ပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ရက်စွဲများကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါ။ (သူတို့ကဒီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကောင်းအောင်ကြည့်ပါ) …အခြားမကောင်းသောဤအလေ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးရန်အားမပေးပါစေနှင့်။ အသုံးပြုသူများအတွက်ဆိုးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုပြုလုပ်သူများသည်မကောင်းသောအလင်းရောင်ထဲသို့ကျသွားလိမ့်မည်။
ဒါကိုဝေးဝေးအောင်လုပ်တဲ့ဘလော့ဂါတွေကိုမှတ်ထားပါ။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုဆက်ပြီးအသွားအလာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ရေးပါ။ သင်၏အသွားအလာကိုထိန်းသိမ်းရန်သင့်အားအသုံးပြုသူများကိုအားမကိုးပါနှင့်။
Doug ဒီမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ vibes တွေပတ်ပတ်လည်မှာ။ 🙁
မေလ 12, 2008 မှာ 5: 47 pm တွင်
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောမကောင်းသောအလှည့်ဖျားထားတော်မူ၏။ ငါမရိုးမသားဖြစ်ခြင်းအခြဆိုလိုဘူး။ Doshdosh အသစ်ရော၊ အဟောင်းရောပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာကောင်းများပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကောင်းသော site ဖြစ်သည်! သူတို့ရဲ့ 'undated' ဆောင်းပါးတွေကသူတို့ကိုကြာကြာနေဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Excel ဖော်မြူလာများပေါ်တွင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရေးသားလျှင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် 'အသစ်သော' ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရှာပြီးသတ္တုတွင်းကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းမှာပြproblemနာဖြစ်သည်။ လူတွေဟာကျနော့်ကွန်ရက်ကိုလာကြည့်တယ်၊ အဲဒါကတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ၊ သူတို့ကပိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဟာအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာလေ့ရှိတယ်။
ဒါကြောင့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့အကယ်လို့သင်ဟာထိပ်တန်းဘလော့ဂါအချို့ကို (ရက်စွဲများကိုအသုံးပြုခြင်း) ကိုအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲထိန်ချန်လေ့ရှိပါတယ်။ လတ်ဆတ်သောအကြောင်းအရာသည်သင်၏စာဖတ်ပရိသတ်ကိုကြီးထွားစေရန်ခွင့်ပြုသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။
ငါသဘောတူတယ်၊ ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းအရာကအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးလိမ့်မယ်။ ငါသတိပြုမိတာကသင်ဟာသင့်ကိုအားနည်းချက်ရှိစေနိုင်တဲ့အချက်ကို 'သက်တမ်းကုန်ဆုံး' ခြင်းဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်ထိုက်တန်ပါတယ်။
မေလ 13, 2008 မှာ 9: 45 AM
lol @ မကောင်းသောအလှည့်။ အဲဒါကငါ (မကောင်းဘူးလား) ကောင်းတာတစ်ခုကအဆိုးဆုံးမြင်တာပါ။ (၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် PR မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားသည်။ အလွန်စိတ်မကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဆိုးရွားလှသည့်မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်ရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးအဆိုးဆုံးထောင့်ကိုရှာဖွေရန်နေ့စဉ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်။
ငါသူတို့ရဲ့အသစ်သောအကြောင်းအရာများကိုအသစ်သောပို့စ်အသစ်တစ်ခုအဖြစ်ပြန်လည်ထည့်သွင်းထားသောဘလော့ဂါများကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ငါသူတို့ကို, တူညီတဲ့ icky အလငျး၌ချပစ်ကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ (ဖြစ်နိုင်သည်မှာပိုမိုဆိုးရွားသည့်အလင်းပင်ဖြစ်သည်၊ ထိုအလေ့အကျင့်၏ရိပ်မိမှုသည်လုံးလုံးလွင်ပြင်ထင်ဟပ်နေသည်။ )
Excel ဖော်မြူလာ၏ဥပမာကိုတုန့်ပြန်ရန်… အကယ်၍ ဘလော့ဂ်ဂါသည်တတိယပါတီမှတ်ချက်ပေးစနစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးရက်စွဲများကိုထားခဲ့ပြီးဆောင်းပါးအား“ လတ်ဆတ်နေစေ” လိုပါက ၃-၆ လတိုင်းဤစာ၏ကိုယ်ခန်ဓာကိုအလိုလျောက်အဆင့်မြှင့်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ “ Update: * Joe Schmo * သည်အပေါင်ပစ္စည်းတွက်ချက်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာဖော်မြူလာ ၂ ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ” (ကြယ်ပွင့်များရှိစာသားနှင့်အဆက်အစပ်ရှိလျှင်) ၎င်းသည်သင်၏စာမျက်နှာအားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်တိုးမြှင့်ထားသောတိုးမြှင့်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အခြားဘလော့ဂါများ (အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်ကိုဖန်တီးခြင်းသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်) ကိုပေးလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာ၊ အတွေးအခေါ်သစ်များသို့ ဦး တည်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှု။ သင်အနိုင်ရသည်၊ သင်၏စာဖတ်သူများအနိုင်ရသည်။ နှင့်သင့်ဘလော့ဂါများကအနိုင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤချဉ်းကပ်နည်းသည်လူတိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်၊ မကောင်းသောအလေ့အကျင့်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အမြစ်တွယ်နေသောကြောင့် (အကြောင်းအရာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့) မဟုတ်ဘဲလူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်ရွေးချယ်စရာများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသည်သင်တို့၏ feed ကိုယခုစာရင်းပေးမယ်။ 🙂
(PS-nityypicky မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အခြားပါတီတစ်ခု၏မှတ်ချက်ပေးမှုစနစ်များကိုကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်မှတ်ချက်တွင်ယခုတွင် Text-link-ad ရှိသည်။ မှတ်ချက်ရေးသားသူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုနှောင့်ယှက်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Disqus လိုအရာတွေဟာဆာဗာဆီကိုကန ဦး တောင်းဆိုမှုမှာစာမျက်နှာပါ ၀ င်မှုထဲကိုမထည့်သွင်းထားလို့ပါ။ သူတို့က text-link-ad plug-in တွေက“ ပြောင်းလဲ” လို့မရဘူး။ hehehe ။ ငါထွက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကတကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ငါပါ။
မေလ 13, 2008 မှာ 10: 15 AM
လုံခြုံမှုရှိရန်၊ ၎င်းသည် Text Link ကြော်ငြာမဟုတ်ဘဲ Kontera ကြော်ငြာဖြစ်သည်။ 🙂 Kontera သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်လုံခြုံမှုရှိသည်။ Text Link ကြော်ငြာများသည် ဦး ထုပ်ဖြစ်သည်။
Kontera ကြော်ငြာများအတွက်မှတ်ချက်များကိုအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းထားရန်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သဘောကျသည်။ ငါဒီမှာတစ်မိနစ်၌ဤသို့ပြုပါလိမ့်မယ်!
မတ်လ 1, 2012 မှာ 3: 04 AM
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်အသုံးဝင်။ သက်ဆိုင်မှုရှိပါကပါဝင်သည့်အရာများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစာမျက်နှာအဆင့်ကိုသေချာစေပါ
သတင်းအချက်အလက်။ ပိုမို၍ ထူးခြားသောစာဖတ်သူများကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။